मुक्तिनाथको खुल्यो ४०% हकप्रद, कहाँ जाने फारम भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » मुक्तिनाथको खुल्यो ४०% हकप्रद, कहाँ जाने फारम भर्न ?
काठमाडौं - मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४०% हकप्रद आजदेखि बिक्री खुला भएको छ । मुक्तिनाथले १०ः४ अनुपातमा ६१ लाख ७० हजार ८६५.०४ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो । बैंकले हकप्रद प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरको बिक्री खुला गरेको छ । हकप्रद भर्ने अन्तिम म्याद भने असोज ८ गते तोकिएको छ । हाल मुक्तिनाथको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५४ करोड २७ लाख १६ हजार २६० रुपैयाँ छ । हकप्रद बिक्रीपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १५ करोड ९८ लाख २ हजार ७६४ रुपैयाँ पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी बैंकले बोनस मार्फत पुर्याउने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकले ४९ करोड ४४ लाख ९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) ३२ रुपैयाँ ११ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४९ रुपैयाँ ८० पैसा छ ।
यो हकप्रदमा एनआइबीएल क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौं तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, नेपालगंज र धनगढी शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, मुक्तिनाथको रजिष्टर्ड कार्यालय कमलादी र यसका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट पनि हकप्रदका लगि आवेदन दिन सकिनेछ ।